यसरी रच्यो क्रिकेटमा नेपालले ईतिहास, बधाई को ओईरो ! – On Khabar
Banner News खेलकुद गृहपृष्ठ प्रमुख समाचार समाचार
February 3, 2019 February 3, 2019 onkhabar	Comment(0)
टी ट्‍वान्टी शृङ्खला अन्तर्गतको नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्‍स (यूएई)बीचको तेस्रो खेलमा नेपाल विजयी भएको छ । तेस्रो तथा निर्णायक खेलमा १४ रनले युएइलाई स्तव्ध बनाउँदै एकदिवसीय सिरिज आफ्नो पोल्टामा पारेको हो । योसँगै नेपालले पहिलोपटक टि ट्वान्टी सिरिजमा समेत आफ्नो कब्जा जमाएको छ ।
नेपालले दिएको १०५ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा युएइले निर्धारित ओभरमा ९० रन मात्र बनाउनसक्यो । नेपालका लागि करण केसी, ललित राजबंशी र अविनास बोहोराले समान २र२ विकेट लिए भने सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछाने १–१ विकेट लिए भने ब्याटिंगतर्फ युएइका गुलाम सब्बिरले २५, सइमान अनवरले ३० रन जोडेका थिए ।
यसअघि भएका २ खेलमध्ये पहिलो खेल युएईले २१ रनले जितेको थियो। दोस्रो खेल नेपालले ४ विकेटले आफ्नो पक्षमा पार्दै सिरिज १९१ को बराबरी गरेको थियो।
यसअघि सम्पन्न तीन खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजमा नेपालले यूएईलाई २–१ ले पराजित गरेको थियो ।
कालिकोटमा सडक खन्दै नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्ड
अनखबर सँवाददातापुष २, कालिकोट विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले के गर्दै होलान् ? सर्वत्र चासोको विषय हो, राजनीतिक दलका नेताहरु सभा, सम्मेलन, गोष्ठिमा भाषण गर्न र अतिथी बन्न भ्याईनभ्याई भैरहेको अवस्थामा नेकपाका नेता भने जनताको काममा व्यस्त देखिन्छन् । कतिपलायलाई अचम्म लाग्न सक्छ विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता यतिबेला कालिकोटमा सडक खन्दै छन् । नेपाल […]
अनखबर माघ १४, २०७५ दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङले अन्ततः पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा सोमबार उनलाई प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाएका हुन् । रेशम चौधरीले शपथ लिएलगत्तै मनाङ जिल्ला प्रदेश ९ख० बाट निर्वाचित दीपक मनाङ्गेको पनि शपथको लागि चौतर्फी दबाब थियोे । विभिन्न विवादित मुद्दामा […]
केपी ओली भन्छन्, ‘पार्टीबाट सहयोग भन्दा धेरै आलोचना भयो’ !
December 27, 2018 December 27, 2018 onkhabar
अनखबर १२ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा सरकारको आलोचना भए पनि जनताबाट वाहवाही पाएको टिप्पणी गरेका छन् । केही दिनदेखि बस्दै आएको नेकपा स्थायी कमिटीमा बिहीबार ओलीले नेताहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनले २ घन्टा १० मिनेट सम्बोधन गरेका थिए तर, अधिकांश समय आफ्नो नेतृत्वको सरकारको प्रशंशामा […]
जनतासँग मकै बेच्दा कर लिने सरकारले एनसेलको ७२ अर्ब कर किन लिन्न ? Ncell ले कर नतिरे टावर ध्वस्त : गैरे
अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै मालपोत कर्मचारीलाई कालोमोसो कस्ले दल्यो ?
सहिद दिवस : पुरा भयो सहिदका सपना ? (चार सहिदको विवरणसहित)